December 2018 - Ceelhuur Online
December 31, 2018 Cali Yare215
December 31, 2018 Cali Yare264
Wareegto kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariissoow ayaa waxaa gudoomiye cusub loogu magacaabay degmada Cabdicasiis. Gudoomiye Yariisoow ayaa gudoomiyaha cusub ee Degmada Cabdicasiis ee gobolkaan Banadaair u magacabaay Ismaaciil Mukhtaar Cumar (Ismaaciil Orange). Gudoomiyaha cusub ee loo magacabaay degmada Cabdicasiis ayaa waxaa uu kamid ahaa shaqalaha wasaaradda warfaafinta xukuumada federaalka Soomaaliya. Maalinimadii […]
Xildhibaan Odawaa oo si weyn loogu soo dhaweyey Baxdo (Sawirro)
December 31, 2018 admin416
Wasiirkii hore Arimaha Gudaha Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey degmada Baxdo gobolka Galgaduud. Xildhibaanka ayaa waxaa safarkiisa ku wehliyey gudoomiyaha degmada Cadaado iyo masuuliyiin kale. Sidoo kale xildhibaanka ayaa daah furay dhowr mashruuc: Dhagax dhigga Dhismaha 4 qol oo lagu kordhinayo Dugsiga Baxdo, Dhismahan ayaa waxaa si wadajir ah […]
Askartii Itoobiyanka oo dib loogu celiyey dalkooda (Sawirro)
December 30, 2018 admin272
Wafdi ka socda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta barqadii gaaray deegaanka Galinsoor ee degmada Cadaado, wafdigan ayaa waxaa hogaaminayey wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriye. Wafdigan ayaa kulan la qaatay dadka deegaanka, waxaana wadahadal dheer la isku afgartay in Labadii askari ee itoobiyaanka aheyd ee lagu qabtay dagaalkii Kaxandhaale dib loogu celiyo dalkooda, balse […]
December 30, 2018 admin212
Wasiirkii hore Arimaha Gudaha Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa iyo gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Tootoole ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay xarunta Dhalmada Hooyada Uurka leh deegaanka Gidheys ee degmada Cadaado. Xaruntan ayaa waxaa dhisaya Jaaliyadda Dibadda ee kasoo jeeda deegaankan, Farxaan Maxamed Dhoore oo wakiil ka ahaa Jaaliyadda ayaa balan qaaday in jaaliyaddu bixin […]
December 30, 2018 admin247
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo ay wehliyaan Ciidamo Mareykan ah ayaa Howlgal qorsheysan ka fuliyay gudaha degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhaxe. Howlgalka ayaa laga fuliyay Xarun tababar Maleyshiyada Al-shabaab ay ku lahayeen gudaha Magaalada Jilib ee Xarunta Gobolka Jubbada Dhaxe. Taliyaha qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed General Cali Maxamed Maxamuud (Bogmadow) oo la […]
Wasiirka Arimaha Gudaha DFS oo gaaray Galinsoor
December 30, 2018 admin206
Wafdigii ka socday dowladda Federaalka ee shalay soo gaaray Cadaado, ayaa maanta safar ku tagay Magaalada Galinsoor halkaas oo lagu hayo 2 askari oo itoobiyaan ah. Wafdigaan ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka Arimaha Gudaha DFS Cabdi Sabriye, waxaana safarkiisa ku wehliya Wasiiru dowlaha Howlaha Guud DFS Axmed Qoorqoor, Wasiir ku xigeenka Xanaanada Xoolaha DFS Cabdikariin Khaliif […]
December 29, 2018 admin301
Waxaa maqribnimadii kasoo dagay garoonka diyaaraha Cadaado wafdi ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya, wafdigan ayaa waxaa hogaaminayey wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriye, waxaana safarkiisa ku wehliyey Wasiiru dowlaha Howlaha Guud DFS Axmed Cabdi Kaariye [Qoorqoor], wasiir ku xigeenka Xanaanada Xoolaha DFS C/kariin Khaliif Dhalac, iyo Taliyihii hore Xoogga Dalka Gen Gorod. Dadweyne farabadan […]
December 29, 2018 admin290
Wasiirkii hore arimaha gudaha Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa ayaa xarigjaray Ceel biyood uu ka hirgaliyey deegaanka Xinjilab ee degmada Cadaado. Dhanka kale munaasabadda xarigjarka ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug, Gudoomiyaha Degmada Cadaado. Xildhibaan ka dhabeeyey Balanqaad uu u sameeyey dadka deegaanka bartamihii 2015, ceelka ayaan waxaa ka faa’iideysan doona tuulooyin badan […]
December 29, 2018 December 29, 2018 admin433
Deegaanka Kaxandhaale ee ku yaala xadka Soomaaliya iyo Soomaali galbeed ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyey laba maleeshiyo beeleed oo kasoo kala jeeda Dhabad iyo Galinsoor. Dagaalkii dhacay 28/12/2018 ayaa waxaa kusoo biiray ciidan itoobiyaan ah, goobta dagaalku dhacay waa 12 km gudaha Soomaaliya sida ay inoo xaqiijyeen goobjoogayaal, […]